पिल्स: कस्ता महिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छन् ? कहिले खाने र कसरी ग`र्भ रहन दिँदैन ?थाहा पाउनुहोस्…
June 18, 2021 9092
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ?काठमाडौं – पिल्स (खानेचक्की) महिलाले प्रयोग गर्ने ग,र्भनिरोधको अस्थायी साधन हो । यो गर्भ,निरो`ध गर्न चाहने महिलाहरुको लागि ज्यादै प्र,भावकारी अस्था,यी साधन हो ।
पिल्सले कसरी ग,र्भ रोक्छ ?
पिल्स चक्की खानाले महिला`को डिम्बा,शयबाट डिम्ब निष्का,सन हुन दिंदैन । पाठे|घरको मुखबाट निस्किने तरल पदार्थ`लाई बाक्लो र थोरै बनाउँदछ, जसले गर्दा शु,क्रकीट लाई पा,ठेघर भित्र जान बाधा पुयाउँछ । पाठे`घरको भित्री`पत्रलाई पातलो गर्दछ र ग,र्भ बस्न दिंदैन ।
पिल्स महिलाहरुको भरपर्दाे परिवार नियोजनको अस्थायी साधन हो । बच्चा जन्माएका वा नजन्माएका कुनै पनि महिलाहरुले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
गर्भ रहेको शंका लागेमा,क्षयरोग वा छारे रोगको औषधी खाइरहेमा, उच्च रक्तचाप भएमा,३५ वर्ष नाघेकी र चुरोट, बिडी सेवन गर्ने बानी भएमा ।
महिनावारी भएको ५ दिन भित्र सुरु गर्नुपर्दछ ।महिनावारी भएको ५ दिन कटिसके पनि यदि महिला गर्भवती नभएको निश्चित भए महि,नावारी चक्रको कुनै पनि समयमा चक्की लिन सकिन्छ । ५ दिन कटिसकेपछि पिल्स खान सुरु गरेकी महिलाले गर्भ रहन नदिन ७ दिन सम्म यौ,न सम्पर्क नगर्ने वा गर्नु परेमा कण्डमको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
पिल्स खानाले ,एच,आ,ईभी र यौ,न रोग सर्नबाट बचाउँदैन । त्यसैले एच।आई।भी। र यौन रोगबाट बच्न कण्डमको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।पिल्स खाएपछि कसैकसैमा देखिन सक्ने असरहरु,वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, स्तन दुख्ने,महिनावारी बाहेक अन्य समयमा पनि रगतका थोपाहरु देखा पर्न सक्ने
लगातार एक वा दुई दिन सम्म पिल्सको सेतो चक्की खान छु`टेमा अथवा नियमित पिल्स खाइ`रहेकी महिलाले नयाँ पत्ता शुरु गर्न एक वा दुई दिन ढिलो भएमाः (सम्झिने बित्तिकै एक चक्की खाई`हाल्नुपर्छ । त्यसदिन खानु पर्ने चक्की सधै खाने समयमा नै खाने । यसो गर्दा त्यस दिन दुईवटा चक्की खानुपर्ने हुन्छ । बाँकि चक्की सदाझै खाइरहनु पर्दछ ।)
लगातार तीन वा तीनभन्दा धेरै दिनसम्म पिल्सको सेतो चक्की खान छुटेमा अथवा नियमित पिल्स खाइरहेकी महिलाले नयाँ पत्ता सुरु गर्न तीन वा तीन भन्दा धेरै दिन ढिलो भएमासम्झने वित्तिकै एक चक्की तुृरून्तै खाने । त्यस दिन खानु पर्ने च,क्की सधैं खाने समयमा नै खाने । बाँकि चक्की सदाझैं खा,इरहनु पर्दछ ।
Prevमेलम्चीमा सहयोग गर्न पुगिन् कल्पना दाहाल: बाढी पिडितको कुरा सुन्दा आँशु रोकिएन (भिडियो सहित)
Nextबिरालोलाई पनि सेक्योरिटी गार्डको जागिर ! यस्तो छ बिरालोको तलब
आज नेपालमा थप १८ संक्रमितको मृ त्यु, यी जिल्लाका हुन् मृत’क…
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132904)